SAWIRRO: UK oo ka carooday Mareykanka joojisayna inay la wadaagto xogta sirdoon - Hablaha Media Network
SAWIRRO: UK oo ka carooday Mareykanka joojisayna inay la wadaagto xogta sirdoon
HMN:- Booliska wada baaritaanka weerarkii Manchester ayaa joojiyay inay xogta baaritaanka la waaagaan dhigooda Mareykanka kadib markii warbaahinta loo tusiyay macluumaad ku saabsan baaritaanada socda.
Mas’uuliyiinta UK ayaa caro ka muujiyay sawirrada muujinaya haraaga waxyaabihii loo adeegsaday qaraxa oo mas’uuliyiinta Mareykanka ay la wadaageen wargeyska New York Times.
Waxay sidoo kale dowladda Britain ka carootay in magaca ninka weerarka geystay loo dusiyay warbaahinta Mareykanka saacado uun ka dib weerarka oo ay ku dhinteen 22 qof, 64 qof oo kalana ay ku dhaawacmeen.
Ra’iisala wasaaraha Britain, Theresa May, ayaa lagu wadaa inay walaacan ay la wadaagto madaxweyne Donald Trump marka ay maanta ku kulmaan shirka madaxda NATO. BBC-du waxay fahansan tahay in booliska Manchester uu dhawaan dib u soo celin doono hanaaka uu xogta sirdoonka kula wadaaga Mareykanka.
Mareykanka, UK, Australia, Canada iyo New Zealand ayaa ku midoobay isbaheysiga loo yaqaanno ”Shanta indhood” ee wadaaga xogta sirdoonka la xiriira argagixisada.
Ilaa iyo sideed qof oo lala xiriirinaya weerarka Manchester ayaa ilaa hadda la soo qabtay. Weerarkaasi waxaa geystay Salmaan Cabedi oo ahaa 22 jir ay qoyskiisa ka soo jeedaan dalka Liibiya.
Waxaa sidoo kale soo baxday in labo qof oo horay u taqaanay Cabedi ay booliska sanado ka hor uga digeen fikradihiisa xagjirnimada.
Haweeney ayaa ka mid ah dadka loo qabtay weerarkii ka dhacay Manchester, xilli ay booliska sheegeen in ay baarayaan “shabakad” la rumaysan yahay in ay ka dambeysay qaraxaasi.
Boolisk ayaa sheegay in ay xireen haweeneydaasi, ka dib markii ay xoog ku galeen guri ay ka deganeyd Blackley, waqooyiga Manchester. Ramadan oo ah aabaha dhalay ninka qaraxa fuliyay, iyo Haashim oo ay ninkaasi walaalo yihiin ayaa lagu qabtay caasimadda Tripoli ee dalka Liibiya.